🥇 Ukubalwa kwee-odolo kunye nokuhanjiswa
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 955
Ukubalwa kwee-odolo kunye nokuhanjiswa
Ividiyo ye-accounting yeeodolo kunye nokuhanjiswa
Odola i-akhawunti yeeodolo kunye nokuhanjiswa
Inkqubo ye-Accounting System ye-Universal Accounting yenzelwe ngokukodwa ishishini eliphumelelayo lothutho, uthutho, i-courier kunye neenkampani zokurhweba: isoftware ecingisiswe ngononophelo ikuvumela ukuba wenze ngokuzenzekelayo iinkqubo zomsebenzi, uphucule ulungelelwaniso lomsebenzi, ukulawula ukwenziwa kweodolo, ukulandelela isigaba ngasinye. yokuhanjiswa, ukuhlalutya umgangatho weenkonzo ezinikezelweyo kunye nokugcina ingxelo eneenkcukacha yeodolo nganye engenayo negqityiweyo. Isoftware esiyinikezelayo ibonelela ngoluhlu olubanzi lwezixhobo zokucwangcisa zonke iinkalo zoshishino, ukusuka ekugcineni nokuhlaziya i-database ukuphuhlisa izicwangciso zemali kwixesha elizayo; kodwa owona msebenzi uphambili osombululwa yile nkqubo kukubalwa kwee-odolo kunye nokuhanjiswa. Ukuhanjiswa kwempahla kufuna inkqubo ecokisekileyo yolungelelwaniso kunye nokulandelela ixesha langempela ukwenzela ukuba utshintshe ngokukhawuleza iindlela kwaye uthathe onke amanyathelo ayimfuneko ukuzalisekisa imiyalelo ngokuhambelana nemihla ecwangcisiweyo. Ngaloo ndlela, inkqubo ye-accounting inegalelo ekuphuculeni umgangatho weenkonzo, ukuguqulwa okuphezulu kwezicelo zabathengi, ukwanda kunye nophuhliso lweshishini kwaye, ngokuqinisekileyo, ukufunyanwa kwengeniso ephezulu rhoqo.
Isoftware ye-USU iyahluka kwiinkqubo ezifanayo ngokulula kunye nesantya somsebenzi kuyo, ukwakheka okubonakalayo kunye nojongano. Inkqubo yokubala ihlukaniswe kwiibhloko ezintathu eziphambili, nganye eyenza umsebenzi wayo kwaye idibene nabanye. Icandelo leeReferensi lilayibrari yedatha ehlala ihlaziywa kwaye yongezwa ngabasebenzisi. Igcina ulwazi malunga nezinto zemali kunye neeakhawunti zebhanki, oonxibelelwano lwabasebenzi kunye nabathengi, idatha yamasebe, uluhlu lweenkonzo kunye neendleko, iishedyuli zendiza kunye neenkcazo zendlela. Icandelo leeModyuli lelona liphambili kwaye liyindawo yokusebenzela yokubhalisa iiodolo ezintsha zokuhanjiswa nokubekwa esweni kwee-odolo eziqhubekayo. Umyalelo ngamnye uqulethe ulwazi malunga nomthumeli kunye nomamkeli, umxholo wokuhanjiswa, imilinganiselo, iindleko, ikontraki, ukubalwa kweendleko kunye namaxabiso. Ngelo xesha, inkqubo yenza umsebenzi wokuzalisa ngokuzenzekelayo irisithi kunye nesiliphu sokuhambisa, kunye nokuprinta nawaphi na amaxwebhu ahamba nawo, okwenza lula umsebenzi kwaye wenze ukuba usebenze ngakumbi. Kwakhona, naluphi na ulwazi malunga nee-odolo zinokungeniswa ngaphandle kwaye zithunyelwe ngaphandle kwisistim kwi-MS Excel kunye neefomathi zefayile ye-MS Word. Ngokucwangcisa ukuthunyelwa kwexesha elizayo, kuya kuba lula kubaququzeleli ukulawula iinkqubo zokuhanjiswa kwempahla. Ke, ibhlokhi yeeModyuli sisixhobo esisebenza ngokupheleleyo esipheleleyo kuwo onke amasebe. Icandelo leeNgxelo libonelela ngamathuba awoneleyo ocwangciso-mali nolawulo ngokwenza umsebenzi wokuvelisa iingxelo ezahlukeneyo kulo naliphi na ixesha elinikiweyo. Ulawulo lwenkampani luya kukwazi nangaliphi na ixesha ukulayisha ulwazi lohlalutyo malunga ne-dynamics kunye nesakhiwo sengeniso, izinga lokukhula kwenzuzo, kunye nenzuzo yenkampani. Naluphi na ulwazi lwemali lunokubonwa ngendlela yeegrafu kunye nemizobo.
Inkqubo yokubala i-delivery order accounting iyimfuneko kwinkonzo yekhuriya ukuze ilandele umgangatho wokwenziwa komyalelo, yenza inqanaba ngalinye lothutho, ijonge ukufaneleka kwazo zonke iindleko ezenziweyo, ukulawula ukuthotyelwa kwezalathi zengeniso zokwenyani nezicwangcisiweyo, njl. njl. Thenga i-Universal Accounting Isoftware yenkqubo yomsebenzi osebenzayo kunye osebenzayo!
Isoftware yenkonzo ye-courier ikuvumela ukuba ujongane ngokulula noluhlu olubanzi lwemisebenzi kwaye usebenze ngolwazi oluninzi kwiiodolo.
Ukubalwa kwengxelo yokuhanjiswa kusetyenziswa inkqubo ye-USU kuya kukuvumela ukuba ulandelele ngokukhawuleza ukuzaliseka kwee-odolo kunye nokwakha indlela yekhuriya.
Inkqubo yonikezelo ikuvumela ukuba ugcine umkhondo wokuzaliseka kwee-odolo, kunye nokulandelela izalathi zezimali zenkampani yonke.
Ngokubalwa kokusebenza kwee-odolo kunye nokubalwa ngokubanzi kwinkampani yokuhambisa, inkqubo yokuhanjiswa iya kunceda.
Ukuzenzekela kwenkonzo yekhuriya, kubandakanywa namashishini amancinci, kunokuzisa inzuzo enkulu ngokunyusa iinkqubo zokuhanjiswa kunye nokunciphisa iindleko.
Inkqubo yokuhanjiswa kwempahla ikuvumela ukuba ujonge ngokukhawuleza ukwenziwa kwee-odolo zombini ngaphakathi kwenkonzo yekhuriya kunye nolungiselelo phakathi kwezixeko.
Inkqubo yekhuriya iya kukuvumela ukuba ukwandise iindlela zokuhanjiswa kunye nokugcina ixesha lokuhamba, ngaloo ndlela ukwandisa inzuzo.
Gcina umkhondo wokuhanjiswa kwempahla usebenzisa isisombululo sobuchwephesha esivela e-USU, esinomsebenzi obanzi kunye nokunika ingxelo.
I-automation ye-automation eyenziwe ngokufanelekileyo ikuvumela ukuba ukhulise umsebenzi weekhuriya, ugcine izixhobo kunye nemali.
Ukuba inkampani ifuna ingxelo ngeenkonzo zokuhanjiswa, ke esona sisombululo singcono sinokuba yisoftware evela kwi-USU, enomsebenzi ophambili kunye nengxelo ebanzi.
Ubalo olupheleleyo lwenkonzo ye-courier ngaphandle kweengxaki kunye nokuphazamiseka kuya kubonelelwa ngesoftware evela kwinkampani yase-USU enomsebenzi omkhulu kunye nezinto ezininzi ezongezelelweyo.
Ukugcinwa ngokupheleleyo kwesiseko somthengi kunye nesalathiso soqhagamshelwano, iintlanganiso kunye neziganeko, ukuthumela izaziso malunga nezaphulelo kunye nezinye iziganeko.
Ukuthumela kubathengi izaziso ngabanye malunga nobume kunye nokuzaliseka komyalelo, kunye nezikhumbuzo zesidingo sokuhlawula.
Ulawulo lwetyala kunye nommiselo, ukufumana kwangethuba imali evela kubaxumi, ukuthintela imeko yokusilela kwemali.
Uhlalutyo lwamandla okuthenga abathengi ngokuvelisa ingxelo kwi-bill ephakathi, kunye nokuthathela ingqalelo ukusebenza kwemali yosuku ngalunye lokusebenza.
Inkqubo inezixhobo zokuthengisa kwi-funnel yentengiso yokuthelekisa izikhombisi zenani lokunikezelwa kokunikezelwa okwenziwe, abathengi abaye baqhagamshelana, kwaye ngokwenene bagqiba ukuthunyelwa.
Ingqwalasela ekhethekileyo ihlawulwa ekuthatheni ingqalelo ezona zibonakaliso zezemali ezibalulekileyo zentlawulo yeshishini, ukuvavanya ukuguquka kwenzuzo kunye nexabiso layo elinokubakho, ukuhlalutya inzuzo kunye nophuhliso lwamathemba.
Kukulungele ukuqhuba umsebenzi odibeneyo wawo onke amasebe kwiqonga elilodwa lokusebenza kunye nenkqubo enye yokusebenza kunye nombutho weenkqubo.
Iiodolo zihamba ngenkqubo yokuvunywa kwe-elektroniki, ekhawuleza kakhulu ukuthutha.
I-akhawunti ye-Payroll iqhutyelwa ngokuzenzekelayo ukubalwa kwe-piecework kunye nepesenti yomvuzo, okunceda ukuphelisa iimeko zeempazamo.
Amathuba amaninzi oqikelelo lwemali olusebenzayo, kuthathelwa ingqalelo iinkcukacha-manani zamaxesha adlulileyo kunye nokusekwa kwezicwangciso zoshishino.
Iindlela zokuhambisa zingatshintshwa ngexesha lokuthutha ukuba kuyimfuneko.
Uphicotho lwentsebenzo yabasebenzi ngokuthathela ingqalelo ukusetyenziswa kwexesha lokusebenza kunye nesantya sokufezekiswa kwemisebenzi eyabelweyo.
Inkqubo ikuvumela ukuba uqhoboshele nayiphi na i-attachments kwaye uyithumele nge-imeyile.
Ulungelelwaniso olwahlukeneyo lwenkqubo lunokwenzeka ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno kunye neenkqubo zangaphakathi zombutho ngenxa yokuguquguquka kwezicwangciso.
Ukubalwa kweemali ezifunyenweyo kumxholo wengeniso kwenza kube lula ukuchonga ezona ndawo zithembisayo zophuhliso.
Iikhuriya kunye nokuhanjiswa
Ubalo-mali lombutho wonikezelo
Ubalo-mali lokuziswa kwezinto
Ubalo-mali lokuhanjiswa kwinkampani yezothutho
Ubalo-mali lokuhanjiswa kokutya
ingxelo yokuhanjiswa kwezinto
ingxelo yezibhengezo zerhafu karhulumente
app yonikezelo accounting
usetyenziso lweeodolo zabathumeli
app ekuhanjisweni kwempahla
Iinkqubo ezizenzekelayo zolawulo lokuhanjiswa kwempahla
ukuzenzekela kwenkonzo yokuhanjiswa kwekhuriya
Ispredishithi sokuhanjiswa kwempahla
Ukulawulwa kokuhanjiswa kwekhuriya
Ukulawulwa kwenkonzo yonikezelo
I-app yokuhanjiswa kwe-Courier
Ulawulo lokuhanjiswa kwekhuriya
Ubalo lwenkonzo yokuhanjiswa kweekhuriya
Usetyenziso lwenkonzo yekhuriya
Ulawulo lwenkonzo yekhuriya
Ulwazi ngenkonzo yekhuriya
Ukwandisa inkonzo yekhuriya
Isoftware yeNkonzo yeCourier
Crm yenkonzo yekhuriya
Crm yokuhanjiswa kwempahla
Crm yenkonzo yonikezelo
Crm yokuhanjiswa kokutya
Ukuhanjiswa kwamanzi eCrm
Inkqubo yokubala yokuhanjiswa
Inkqubo yokuhanjiswa kwengxelo
Iinkqubo zokuhanjiswa nokuhanjiswa
Ukuhanjiswa kunye nolawulo lwezorhwebo
Inkqubo ezenzekelayo yokuhanjiswa
Inkqubo yokubala ukuhanjiswa
Amaxwebhu olawulo lokuziswa
Inkqubo yoLawulo lonikezelo
Ukuhanjiswa kwengxelo yabathengi
Inkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo
Ulawulo lwentlangano yonikezelo
Inkqubo yombutho wonikezelo
Inkqubo yokuhanjiswa simahla
Inkqubo yobhaliso lokuziswa
Inkqubo yobhaliso lonikezelo
Inkqubo yokuhanjiswa kwendlela
Inkqubo yokucwangcisa ukuhanjiswa
Inkonzo yonikezelo app
Ukuhanjiswa kwenkonzo ezenzekelayo
Ulawulo lwenkonzo yonikezelo
Inkqubo yenkonzo yonikezelo
Khuphela i-app yokuhambisa ukutya
Khuphela inkqubo yekhuriya
Iinkqubo zokuhanjiswa kweziyobisi
Ukuhanjiswa kokutya app
Ukuhanjiswa kokutya okuzenzekelayo
Ulawulo lokuhanjiswa kokutya
Inkqubo yokuhanjiswa kokutya
Usetyenziso lwenkonzo yokuhanjiswa kokutya
Ukuzenzekela kwenkonzo yokuhanjiswa kokutya
Ukuhanjiswa kwempahla app
Ukubhaliswa kokuhanjiswa kwempahla
Ukugcina iirekhodi zokuziswa kwazo
Ulawulo lonikezelo lwezothutho
Inkqubo yokuhanjiswa kwezinto
Ukuphucula ukuhanjiswa kwempahla
Ukuphucula ukuhanjiswa kwekhuriya
Ukuphuculwa kweendlela zokuhanjiswa
Iodolo yophuhliso lwe-app yokuhanjiswa
Ulawulo lokuhanjiswa kweodolo
Umbutho wenkonzo yokuhanjiswa kwekhuriya
Ubalo lokuhanjiswa kwepasile
Ukuhanjiswa kwepasile app
Ukucwangcisa iindlela zokuhanjiswa
Ulawulo lwemveliso yonikezelo
Inkqubo yokuhanjiswa kwemveliso
Iinkqubo zokukhuphela ukuhanjiswa kokutya
Inkqubo yokwamkela iiodolo zokuhanjiswa
Inkqubo yenkonzo yokuhanjiswa kwekhuriya
Inkqubo yeendlela zekhuriya
Inkqubo yenkonzo yekhuriya simahla
Inkqubo yonikezelo lwenkonzo simahla
Inkqubo yenkonzo yokuhanjiswa kokutya
Inkqubo yolawulo lweekhuriya
Inkqubo yokuhanjiswa kwepizza
Inkqubo yokuhanjiswa kwamanzi
Inkqubo yocwangciso lweendlela zonikezelo
Ukubhaliswa kwenkonzo yonikezelo
Ukubhaliswa kwenkonzo yekhuriya
Iispreadsheets zenkonzo yokuhanjiswa
Ispreadsheets zokuhanjiswa kwempahla
Iinkqubo zolawulo lonikezelo lwezothutho
Inkqubo yokuhanjiswa kwekhuriya